AGROTECHNICA BEERISTA NOOCYO TUFAAX AH GLOUCESTER: TALOOYIN KU SAABSAN ABUURISTA IYO DARYEELKA - GEED GEEDEEDKA
Tilmaanta, beeritaanka iyo daryeesha geedka tufaaxa Gloucester
Apple Gloucester waa noocyo kala duwan oo ah taranta Jarmalka, natiijada noocyo kala goynta ah Glockenapfel iyo Richard Delishes. Kala duwanaanshahaan waxaa la keenay sanadkii 1951 Germany. Faa'iidooyinka noocyada kala duwan ayaa si nabadgelyo leh loogu dhajin karaa quruxda iyo dhadhanka, iyo sidoo kale tayada ilaalinta miraha. Kala duwan tani waxay leedahay dareen adag jiilaalka wanaagsan, laakiin ma u dhaxeyso udul sugaan ku filan.
Astaamaha iyo astaamaha noocyo tufaax ah Gloucester
Qeexida noocyada Gloucester waxay ka bilaaban karaan xaqiiqda ah in ay ka mid tahay tufaaxa barkada dhaadheer. Sababtoo ah gaadiidka tufaaxu waa sareeya Gloucester, waxay ku koraan ma aha oo kaliya bannaanka u hiwaayadda, laakiin sidoo kale by warshadaha. Midhaha geedka waxay leeyihiin muuqaal wareeg ah, oo leh geeso kala duwan oo sare on ugu sareeya midhaha. Midabka Apple waa huruud, wuxuu leeyahay finan cas-cas, oo leh dhibco kala duwan oo hooseeya. Miraha waa jilicsan, dhalaalaya maqaarka cufan. Jidhka xilliga burburku waa cagaar iftiin ah, isagoo hoos u jiifa, wuxuu noqonayaa mid creamy, macaan, casiir leh. Cunto tufaax ah Gloucester waxay gaartay 200 g
Ma taqaanaa? Haddii aad tufaax ku shubto biyaha, ma degi doonto, maaddaama ay tahay 25% hawo.
Qodobbada waxtarka leh ee tufaaxa Gloucester
Haddii aad tiraahdo in tufaaxu ay u fiicanyihiin jidhka bini'aadamka, micnaheedu waa waxba kama dhihin. Faa'iidooyinka Gloucester tufaax jidhka bini'aadanku waa mid aan xad lahayn. Boqolaal garaam oo miro ah ayaa ka kooban dhowr waxyaalood oo yaryar iyo macro, fitamiino, asiidh dufan ah oo aan fiicnayn, asiidhyada dabiiciga ah. Cilmi-baadhayaashu waxay muujiyeen in fiber-ta aan saafiga ahayn ee ku jira tufaaxa, ay kor u qaadaan qaadista kolestaroolka dhiigga, iyo kala dirista pectin waxay ka qaadaysaa kolestaroolka beerka. Saliidaha magnesium ee miro, pectin iyo ascorbic acid ayaa ka caawiya ka hortagga horumarinta atherosclerosis iyo kordhinta difaaca. Awoodda loo qabo in la naqshad galiyo dheef-shiid kiimikaadku waxay samaysay cuntooyin tufaax ah. Haysashada tufaaxa iyo guryaha kaleba, waayo shaandho tufaax ah.
Waa muhiim! Marka lagu daro faa'iidooyinka, tufaaxu wuu dhaawici karaa. Ha ku lug laheeyn xayawaanka tufaaxa ee dadka ku haya boogaha iyo caloosha.
Xulashada iyo diyaarinta geedo yar yar ee beerto
Markaad dooranaysid geedo tufaaxa Gloucester, waa inaad tixgelisaa in rootstocks dhexdhexaad ah, si ka duwan kuwa cufan, bilaabaan inay midho dhasho sannad ka dib (4 sano ka dib markii laga beerto). Dufanka midho dhalinta ayaa kordhaya sannad kasta. Xaddiga ugu badan ee goosashada waa la soo ururin karaa sannadka 10aad ee nolosha dhalashada. Doorashada faseex ah, waa inaad si cad u fahmeysaa nooca geedka aad rabto inaad hesho - dheer ama gaaban. Waa inaadan qaadin geedo ka weyn laba sano, waxay ka sii daraan xididada.
Calaamad muujinaysa da'da laba sano jir ayaa ah 2-3 xayawaan oo ka soo baxaya jirridda. Si taxaddar leh u baaro xididada iyo gooyooyinka, waa in aysan laheyn lakabyo iyo cillado, jir jilicsan ee jilifku waa inay leeyihiin midab cagaaran. Caleemaha geedka loo doorto waa inay noqdaan qoyan, laakiin ma engegin. Badbaadada ugu wanaagsan ee dhalatada, waxaa lagu daadin karaa xalka kiciyaha kobaca muddo dhowr saacadood ah. Qiyaas ahaan ka hortag ah cudurrada, fungicide ayaa lagu daraa xalka. Ka hor inta beerto, xididdada geedka waxaa lagu faafiyaa, kuwa la jajabana waa la jarjarey, meesha la gooyey waa la nadiifiyaa. Seedling diyaarinta waxaa la dhigayaa god ah oo daboolay dhulka. Dhulku si fiican ayuu u ruxaa, oo la waraabiyey xal kale.
Goob iyo ciidda beeritaanka geedo tufaax ah
Markaad dooranaysid meel geedo beerto, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo oo kaliya xaqiiqda ah in ay noqoto qorrax iyo ilaaliyo dabaylaha woqooyiga, laakiin sidoo kale in dhererka geedka tufaaxa Gloucester waa ilaa 2.5 mitir, iyo dhexroorka taajka waa ilaa saddex mitir. Inkasta oo geedaha tufaaxa ah loo tixgeliyo in aanay kudoonayn carrada, carrada dhoobada, iyo sidoo kale loamy iyo carrada ciidda, waxay ku habboon yihiin geedo sii kordhaya. Carrada xawaashka leh qoyaan dabacsan ma noqon doonto mid ku habboon beeritaanka. Haddii aad go'aansato inaad geedka guga gasho, dhulku waa inuu kululeeyaa wax yar, laakiin burooyinkuna waa inay hurdaan. Geedo geedo xilliga dayrta ayaa la sameeyey bil ka hor bilowga ah ee dhaxan.
Diyaarinta goobta iyo beeritaanka geedo tufaax ah
Beeritaanka Apple ee Gloucester waxaa lagu fuliyaa si fiican loo diyaariyey godadka hore, oo qoto dheer oo aan ka yarayn 60 sentimitir, iyo dhexroorka ka badan hal mitir. Ciidda la kariyay waxaa lagu qasan yahay Bacriminta dabiiciga ah.
Geedka si sax ah loo beeray, qoorta aasaasiga ah ee 2-3 cm ka baxaya dhulka. Haddii laga beerto geedo waxaa lagu fuliyaa carrada ciidda, godadka waxaa loo diyaariyaa lakabyada: 10 cm dhoobo, 15 cm oo ah dhirta asal ahaan, lakabka haray ee ciidda lagu qasi kariyo arrin dabiici ah. Geedka loo beeray waa in si badan loo waraabiyaa oo lagu gowraco daaqada (geedku wuxuu ku xiran yahay hiin si uu si siman u koro).
Ma taqaanaa? Qolfaha tufaaxa waxaa ku jira walax aad u sun ah - prussic acid.
Dhirta Apple Gloucester
Geedka ubaxu wuxuu ku dhacaa wakhtiga srednepozdne wuxuuna soconayaa waqti dheer. Duufaanku wuxuu ka kooban yahay 3-4 ubax. Maqnaanshaha manka waxa lagu qiyaasay 40-80%. Iyadoo is-pollination, dhalidda ee Gloucester tufaax noqon doonaa wax ka badan 17% ubax. Si loo helo wax-soosaarka ugu sarreeya ee 26-28%, noocyada tufaaxa ee soo socda waa in loo isticmaalaa sida pollinators: Idared, Gala, Spartan, Jonathan, James Grieve.
Gloucester Macluumaadka Daryeelka Macdanta ee Apple
Daryeelka saxda ah ee tufaaxa waa habsami u socodka waraabinta, bacriminta, manjooyin iyo soosaarista kiimikada. Kobcinta geedaha tufaaxu waxay ku lugleeynayaan cadeyn xaga guga hore ee qaybta hoose ee afkoda. Maaddaama midabka cad uu ka tarjumo qorraxda qoraxda, si cad oo dhirta ka ilaalisa geedo badan oo kuleyl ah iyo qoraxdu.
Fure u ah goosashada Apple tufaax wanaagsan waa waraabinta saxda ah. Dad badan ayaa u maleynaya in ay wanaagsan tahay in la waraabiyo in yar, laakiin badanaa, tani waa qalad.
Waraabinta geedaha tufaaxa waa lagama maarmaan marxaladaha:
markii ugu horeysay waxaa la waraabiyaa ka hor inta aan la nadiifin budada;
marxaladda soo socota waxaa la sameeyaa wax aan ka horeyn 3 toddobaad ka dib dhammaadka ubaxa;
markii saddexaad oo la waraabiyo ka hor goosashada muddo 2 toddobaad ah;
waraabinta ugu dambeysa waa xilliga qaboobaha, la qabtey bishii Oktoobar si looga fogaado in lagu keydiyo beerashada xilliga dayrta qalalan.
Waxaa jira seddex siyood oo waraab ah: roobka (bareemka ama buufinta), dusha sare (waraabinta dhirta agagaarka geedka), faleebo (nidaamka godadka tuubada yar).
Isticmaalka biyaha guud ee hal waraabka:
geedo ilaa laba sano - 30 litir;
geedaha da'doodu tahay 3-5 sano - 50-80 litir;
6-10 sano jir geedo - 120-150 litir.
Waa muhiim! U hubso inaad soo saarto cawska agagaarka beerta, ma aha oo kaliya qaadista nafaqooyinka dhulka, laakiin sidoo kale waxay sii wiiqaysaa horumarinta geedo.
Maxaa iyo goorta la quudiyo
Geedo beeray sanadka ugu horeeya uma baahna quudinta. Sida dhirtu u koraan, qiyaasta nafaqada dheeraadka ah waxay kordhisaa. Bacriminta waxaa lagu dabaqayaa sanad. Dharka ugu sarreeya iyo bacriminta dhirta tufaaxa ah ayaa la samayn karaa labadaba caleen, iyo xidid.
Guga, quudinta ugu horeysa waxaa lagu fuliyaa muuqaalka buugagga ugu horeeya. Waxay sameeyaan Bacriminta nitrogen-ka ee kiciya kobaca firfircoon. Bacriminta soo socda ayaa laga codsadaa: Halka 500 g ama amooniyam nitrate + nitroammophos 40 g mid kasta, ama digada shan baaldiyaal oo lagu qodo agagaarka jirkaaga. Inta lagu jiro xilliga ubax, haddii cimiladu qallalan tahay, Bacriminta waxaa lagu qasi karaa noocyada kala duwan ee toban litir oo biyo ah:
superphosphate 100 g + potassium sulfate - 70 g;
Haga - 300 g;
digada dareere ah - 2 baaldiyo;
slurry - baaldi kala badh.
Ilaa afar baaldiyood oo "cocktail" ayaa lagu shubay hal qof oo waaweyn. Marxaladda xigta ee bacriminta ee xaashida waxaa la fuliyaa inta lagu jiro abuuritaanka midhaha. In toban litir oo biyo ah suuxo 50 g nitrophos + 1 g humate sodium.
Xilliga xagaaga, dharka ugu sareeya waxa ugu wanaagsan oo ay sameeyaan xidid foliar ah, maxaa yeelay waa habka ugu waxtarka badan ee lagu kobcin karo warshadda dhammaan walxaha lagama maarmaanka ah muddada gaaban. Nafaqooyinka foomka nitrogen, qiyaasta gaaska iyo fosfooraska waxaa la soo saaraa labadii toddobaadba mar laga bilaabo badhtamaha Juun. Bacriminta rusheeyaha oo dhan taajka subaxda ama fiidka ee cimilada qalalan. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero bacriminta sida waafaqsan tilmaamaha, si aanay u waxyeeleynin geedka.
Xilliga jiilaalka, bacrimin waxaa laga dalbadaa aagga asalka ah. Ujeedadaas awgeed, iskudhafyada ama digada gaarka ah ayaa loo isticmaalaa.
Ma taqaanaa? Shan shinni oo tufaax ah ayaa ku jira qiyaasta maalinlaha ah ee iodine, oo lagama maarmaan u ah shaqeyn buuxda ee qanjirka thyroid.
Sidee iyo goorta la gooyo
Noocyada Gloucester waa in la gooyaa sanad walba. Inta lagu jiro manjooyin, qalalan, jaban, la qaboojiyey xilliga jiilaalka iyo laamahii hore ayaa laga saaray. Si looga hortago horumarinta cudurada iyo cayayaanka, jilifkii hore ayaa la jaray. Goobo goynta ah ma aha oo kaliya kaliya ka hortagga cudurada geed, laakiin waxay sidoo kale saameysaa size ee dalagga mustaqbalka.
Dhirta Apple waxaa la sameeyaa iyadoo loo eegayo nidaamka qallafsan:
seedling waxay ka kooban tahay garbaha dhexe iyo kan laamihiisa;
Laamiyeyaashu waxay sheeganayaan inay noqdaan xididka dhexe;
dhererka mitirka u dhexeeya xudduudaha heerka sare ah waa 70-80 sentimitir, heerarka 2-3aad waa 35-45 sentimitir;
Tirada laamood ee xuddunta: 1 - 5 laamood, 2nd - 3-4 laamood, 3aad - 3 laamood.
Si kicin koritaanka caleemaha lateral ee sanadka labaad, astaamaha toosan ee geedka gaaban. Laamaha koritaanka ee soo socda ee la socota waxay qaadataa 30% dhererka.
Waa muhiim! Ha ka xumaanin geedka marka aad gasho. Caleemaha bogsashada ma siin doono miro wanaagsan.
Ka hortagga iyo ilaalinta tufaaxa Gloucester ka soo cayayaanka iyo cudurrada
Hababka ka hortagga ah ee looga hortago cudurrada iyo cayayaanka dhirta tufaaxa ayaa la qabtaa guga hore, iyadoo la isticmaalayo 3% xal Bordeaux. Ka saar caleemaha opal iyo daaweynta carrada agagaarka dhirta leh xal "Nitrafen" 0.3%. Ka dib muuqaalka korrinka iyo ubax ka dib, geedka waxaa lagu buufiyaa 0.5% oxychloride copper ama 1% Bordeaux isku dar ah. Si loo burburiyo cayayaanka in ka badan dhulkii dirxiga iyo caleemaha cudurrada fangas, googooye leh qashin ee ciidda ayaa loo isticmaalaa.
Dhirta Apple ee Gloucester kala duwanaa waxaa badanaa ku xiran weerarada ay sameeyaan aphids, sawflies, geedo tufaax ah, abooro, qoryaha, shilinta. Habka ugu muhiimsan ee looga hortago cayayaanka ayaa lagu buufin karaa 0.3% xal karbofos, ama xal 3% Nitrafen, ama Olekuprit (400 g oo lagu qasi karo 10 litir oo biyo ah). Si looga fogaado faafidda calaamadda, laamaha la jaray ayaa la gooyaa, qaybaha waxaa lagu buufiyaa beerta beerta.
Waqti goosashada Apple iyo keydinta Gloucester
Gloucester tufaax tufaaxa - dhammaadka September. Maadaama ay kala duwan yihiin jiilaalka, si buuxda u muujiyaan dhadhanka u baahan tahay nasasho. Cun miraha laga bilaabo bisha Janaayo. Haddii aad ku keydiso tufaaxa, waxay ku sii jiri doonaan illaa February, marka lagu kaydiyo qaboojiyaha, nolol shelf ayaa la kordhinayaa illaa Maajo. Cun tufaaxa jiilaalka iyo horraanta gu'ga.